Basic Political Science Part (15) ~ လူသားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေး အစီအစဉ်
Basic Political Science Part (15)
နိုင်ငံရေး အတွေးအခေါ်နှင့် သဘောသဘာဝများ အပိုင်း (၁၂)
မြန်မာနိုင်ငံ သမိုင်းတလျောက် တိုင်းပြည်အား ... ပြန်လည် စုစည်းထူထောင်ခဲ့ကြသော ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး (၄) ဦးရှိခဲ့ဘူးပါ၏ ... ။
၁။ အနော်ရထာ (ပုဂံခေတ်)
၂။ ဘုရင့်နောင် (ဟံသာဝတီခေတ်)
၃။ အလောင်းဘုရား (ကုန်းဘောင်ခေတ်)
၄။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ( မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေး ဖခင်ကြီး)
ဤ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများသည် လူသာမန်တွေ ဖြစ်သော်လည်း ... သာမန်သူလို ကိုယ်အတွေးမျိုး နိုင်ငံတော်ကြီးနှင့် လောကအတွက် ဆောင်ရွက်ခဲ့သော ပုဂ္ဂိုလ်များ မဟုတ်ကြပေ ... ။ ထို့ကြောင့်ပင် ဤပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများကို မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်း၌ အထူးလေးစား တန်ဖိုးထား အပ်သူများအဖြစ် မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းဖြစ်၏ ... ။
လောက၌လူရယ်လို့ ဖြစ်လာသောအခါ ယေဘူယျအားဖြင့် တောင်းတခြင်း (၄) မျိုးရှိပါ၏ ... ။
၂. စီးပွါးပစ္စည်းဥစ္စာ ပြည့်စုံသထက် ပြည့်စုံလိုခြင်း။
၃. တရားဓမ္မနှင့်အညီ နေထိုင်လိုခြင်း။
၄. လွတ်လပ်မှုနှင့် နေထိုင်လိုခြင်း။
ဖေါ်ပြပါ အခြေအနေလေးရပ်သည် လူတိုင်း လူတိုင်း ခံစားလိုသော သဘောတရားများပင် ဖြစ်၏ ... ။ တနည်းဆိုသော် ပုထုဇဉ် လူသားများ လိုလားသော တောင့်တချက်များသာ ဖြစ်ပါ၏ ... ။ သူလို ငါလို သူများလည်း တောင့်တပါ၏ ... ။ သူလို ငါလို အဆင့်ထက် ကျော်သူများလည်း လိုလား တောင့်တကြပါ၏ ... ။
သို့သော် -သူလိုငါလို အဆင့်ထက် ကျော်လွန်သောသူများ တောင့်တခြင်းသည် ဤတောင့်တခြင်း လေးမျိုးထက် လောက အကျိုးစီးပွါးကို ပိုမို လိုလားတောင့်တကြပါ၏။ လောက အကျိုးအတွက် သော်လည်းကောင်း ... ၊ အများ အကျိုးအတွက် သော်လည်းကောင်း ... ၊ တနည်းအားဖြင့် အဓမ္မအပေါ် ဓမ္မတရားက လွှမ်းမိုးနေမှုကို ပို၍ လိုလား တောင်းတကြပါ၏။
သို့သော် သူလိုငါလို အဆင့်ထက်ကျော်လွန်သော သူများတောင့်တခြင်းသည် ဤတောင့်တခြင်းလေးမျိုးထက် လောက အကျိုး စီးပွါးကို ပိုမိုလိုလားတောင့်တကြပါ၏ ... ။ လောက အကျိုးအတွက်သော်လည်းကောင်း ... ၊ အများ အကျိုးအတွက်သော်လည်းကောင်း ... ၊ တနည်းအားဖြင့် ... အဓမ္မအပေါ် ဓမ္မတရားက လွှမ်းမိုးနေမှုကို ပို၍ လိုလား တောင်းတကြပါ၏ ... ။
ထိုသို့ပို၍ လိုလား တောင်းတသည်နှင့်အမျှ ကြိုးလည်း ကြိုးစားကြ၏ ... ။ အားလည်း အားထုတ်၏ ... ။ ထိုသို့သော ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ စိတ်သန္တာန်၌ သူလိုငါလို တောင့်တခြင်းမျိုး မရှိတော့ဘဲ ... လောကကောင်းကျိုး တခုတည်း အပေါ်၌သာ လုံ့လပြုသောကြောင့် ... တိုင်းပြည်များမှာ လောကပါလတရား ဖြစ်ထွန်းစည်ပင်ပြီး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတတ်ကြကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရပါ၏ ... ။
ဤသို့သော ပုဂ္ဂိုလ်များကို မျိုးချစ်အာဇာနည်များဟု သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတိုင်း နိုင်ငံတိုင်း၌ ခေါ်ဝေါ် ဂုဏ်ပြုကြခြင်း ဖြစ်၏ ... ။ ဤသို့သော ပုဂ္ဂိုလ်များသည် မြန်မာ့ သမိုင်း၌လည်းရှိပါ၏ ... ။ ၄င်းပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် လောကအတွက် မိမိဘ၀များကို ပေးဆပ်သူများဖြစ်၏ ... ။ ဤပုဂ္ဂိုလ်များကို နမူနာယူအပ်၏ ... ။ ထိုသို့နမူနာယူ ကျင့်ကြံ ဆောင်ရွက်နေသူများသည် သာမန်အတွေးအခေါ်များရှိသော သူများအမြင်၌ “လူအ” “လူညံ့” ဟုမြင်နေပေလိမ့်မည် ... ။
အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် အာဇာနည် စိတ်သဘောတရားကို နမူနာယူ ကျင့်ကြံအားထုတ်သော သူများသည် အခွင့်အရေး ဟူ၍လည်း မမက်မော ... ၊ ရာထူး စည်းဇိမ်ဟူ၍လည်း မမက်မောဘဲ လောကသားတို့အပေါ်၌သာ လောကပါလတရား ... ၊ ချမ်းသာခြင်းတရား ... ၊ စသည့် ... ဓမ္မတရားများ လွှမ်းမိုးရေးကိုသာ လိုလားသူများ ဖြစ်သောကြောင့်ပင်ဖြစ်၏ ... ။